Kanjani Ukukhishwa Okusetshenzisiwe Emklamo Wezithombe?
Isofthiwe Ukushicilelwa kweDeskithophu
Lapho Ukuphrinta Elements Ngenhloso Ukugijima Phuma Page
Ekunyathelweni, uma noma yisiphi isithombe noma isici ekhasini lithinta umphetho wekhasi, lidlulela ngaphesheya kokungqimba kwe- trim , lingashiyi i-margin, kuthiwa liphuma. Kungase kuphuze noma kwandise inhlangothi eyodwa noma ngaphezulu. Izithombe, imilayezo, ubuciko bokunamathisela kanye nezakhi zokubhala ezihlotshaniswayo konke kungasuka ekhasini.
Izindleko Ezingeziwe Zokuphuza
Isinqumo sokukhipha isici eceleni kwekhasi kungukukhetha kokuklama. Kodwa-ke, izakhi eziye zaphuma kuleli khasi zinganezela ezindleko zokunyathelisa ngoba iphrinta kumele isebenzise usayizi omkhulu wephepha ukuze ihambisane nesibonelelo segazi futhi kumele ihlise iphepha libe ngosayizi emva kwalokho. Ukunciphisa izindleko, ukuhlehlisa kabusha ukuqeda ukuphuma kwegazi noma ukunciphisa usayizi wekhasi ngokwanele ukuvumelanisa umsebenzi kumakhasi omzali omncane wephepha, okwamanje kudinga ukulinganisa okwengeziwe.
Isibonelo: Uma usayizi wakho wekhasi oqediwe ungama-8.5 x 11 amasentimitha futhi ufaka izinto ezishiya eceleni komshini, iphrinta kumele isebenzise iphepha elikhudlwana kune-8.5 x 11 bese lilinganisa usayizi emva kwalokho. Lokhu kwandisa izindleko zephepha kanye nomsebenzi we-trim extra.
Ukufaka isicelo sokuphuza kwiSofthiwe yokuLawulwa kwekhasi
Uma usebenza ngegazi kumafayela akho adijithali, wandise isici esivela ngaphesheya kokungqimba kwembhalo nge-1/8 intshi. Le mali yanele ngisho noma iphepha lihamba kancane emshinini noma ngesikhathi sokusika. Uma unezinto eziningana ezagazi, sebenzisa iziqondiso ezingezona zokunyathelisa ezibekiwe ku-1/8 intshi ngaphandle kwemigqa yokunquma ukuze kube lula ukubeka.
Uma ngabe isofthiwe yakho ayikuvumeli ukuba uchithe isici ekhasini, sebenzisa usayizi wekhasi elikhudlwana bese ungeza izitshalo ezitshalweni ngotshani oyifunayo we-trim yesiqephu sokugcina.
Izindawo Ezinhle Zokuthenga Amaphoyinti
Amafonti eFree Print and Cursive for Learning Ukubhala kanjani
Funda Ngokusebenzisa Iphrinta Ye-PostScript
Funda Indlela Yokuthayipha Izinhlamvu Ngezimpawu Zama-Umlaut
Hlanganisa izinto kanye ne-Weld Izinto nge-CorelDRAW 7
Ukuqamba nokushicilela i-Newsletter esebenzayo ngohlobo
I-Newsprint Inomphilo Omfushane Nezindleko Eziphansi
Yakha IsiKhwama Segolide Ngezibambo ku-Microsoft Word 2010
Ukusekela kwe-ADS, Amashayeli, Ama-Manuals, nokuningi
I-JBL On Stage IIIp iPhone ne-iPod Ukubukezwa Kwesikhwama Somlomo
I-Pros and Cons ye-Cryptocurrency Ukuthengiswa Kwezimpahla Ezizimele
Indlela Yokuthola Izifanekiso Ze-Microsoft Word Online
Izipho ezingu-7 ezinhle kakhulu zokuthenga zabadlali be-Gamer ngo-2018
Indlela yokusebenzisa i-Face ID ku-iPhone yakho
Amathekisthi Evela Emiphandleni & Life is Strange
Vimbela i-Adobe Reader Kusuka kuvula ama-PDF kusiphequluli
Indlela Yokwenza I-Internet Meme
Indlela Yokwenza Imali Njenge-Reseller Web Reseller
Ngishintsha kanjani i-Windows My Key Product?
Yenza Izinjini Zokusesha I-Web Ephelele?
Ukubuyekezwa kohlelo lokusebenza lwe-iBooks
Setha ukwabelana komndeni kwe-iPhone ne-ITunes
Yiziphi izinsiza ze-In-Car Media?
Ideskithophu Ekude ingaba usizo, kodwa Ungayivimbela kalula
Ungaxoxa kanjani ku-GROWLr
Umhlahlandlela we-DIY wokufaka i-New Unit Unit
I-Super Smash Bros. I-Melee Ikhohlise Amakhodi - Abalingiswa Bokungaxhunyiwe
Sebenzisa i-Photometerge ye-Photoshop ngezingaphezu kwama-Panorama
Iyini Gutter ekushicileleni nasekhasini?